Inkqubo, uyilo, i-UI kunye neekhowudi
Ewe, senza iinkqubo zezinye iinkampani kunye nabantu kwaye sikhona ukusukela ngo-1986. Siyakonwabela ukwenza iinkqubo zeMac, iOS, Android kunye ne-Win. Sine-mastermaker database master. Iifowuni zethu ze-iPhone / i-iPad zikhutshelwe ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezi-3. Sineminyaka elishumi yamava ophuhliso lweselfowuni.
SiseMelika kodwa sinamasebe eYurophu naseAsia. Senze izicelo ezininzi kumaqonga amaninzi. Senze zonke ii -apps ozibonayo kule ndawo kunye nezinye ezininzi ezenziwe phantsi kwesivumelwano esingabonakali apha.
Ungajonga iphepha lethu labathengi Apha. Kwakhona sinalo iphepha le-rave yabathengi Apha. Singakuvuyela ukusebenza nawe kwiprojekthi. Obj. C ye-iPhone / iPod touch / i-iPad / i-Android / iMac okanye i-PHP yezixhobo zewebhu kunye neewebhusayithi. Sikwanabantu abalungileyo bokuyilwa kwemizobo.
Kutheni usikhetha? Kuba sikumgangatho ophezulu, ngokukhawuleza, sinyanisekile, kulula ukusebenza kunye nabo kwaye sifuna ezona zilangazelelo zakho zibalaseleyo. Sisebenza ngeyure okanye ikhontrakthi yeprojekthi.
Ukuba unoluvo okanye imfuneko yesicelo seselfowuni okanye sedesktop, sithumele i email. Sikulungele ukusebenza nawe.
Ngaba ujonga indlela yokukhulisa ubuchule bakho? Ngaba uyazithanda iiprojekthi ezintsha ezinomdla? Ngaba ufuna ukunqanda admin, inkxaso yetekhnoloji, intengiso kunye nentengiso? Ukuba unomdla kwaye ufumaneka ngokupheleleyo okanye ixesha elingelulo, dibana nathi. Siyakwamkela, naphi na emhlabeni, abaqulunqi beenkqubo, abaqulunqi kunye naye nawuphi na umntu onomdla. Qhagamshelana nathi.
I-iPhone, i-iPad, iPod touch, i-Android kunye nezinye izixhobo zeSoftware
Uphuhliso lwezicelo zeMac / Win
Uphuhliso lweZicelo eziKhawulezayo (iRAD)
Umxhasi weenkcukacha zefayile kunye neenkonzo zewebhu.
Ujongano lomsebenzisi kunye noyilo lonxibelelwano
Ukulawulwa kwesiko kunye nezinto ze-UI
Impilo kunye nezinxulumene nezempilo.
Ukudluliselwa kweRadiyo eKhompyutheni kwiDinga lokuSasazwa kweZikhululo zerediyo, ubuntu berediyo kunye neebhendi.
Isoftware kunye ne-screen touch
Ukudityaniswa kweenkonzo zewebhu
Ukuphuhliswa kwezicelo zewebhu